12 Katedraly mahavariana indrindra any Eropa | Save A Train
Home > Travel Europe > 12 Katedraly mahavariana indrindra any Eropa
Train Travel Austria, Fiaran-dalamby Britain, Train Travel Repoblika Tseky, Fiaran-dalamby Frantsa, Fiaran-dalamby Alemana, Fiaran-dalamby any Italia, Train Travel Russia, Fiaran-dalamby Spain, Train Travel UK, Travel Europe
ANJELY, vaovao, Jiro fitaratra miloko marevaka vita amin'ny vera, dia vitsivitsy amin'ireo singa ao amin'ny 12 katedraly mahavariana indrindra any Eropa. Ny katedraly rehetra dia lava kokoa, lehibe kokoa, ary mahasarika kokoa noho ny iray hafa, samy manasongadina singa iray hafa.
1. Katedraly Duomo, Milan
Manintona mpizahatany an-tapitrisany isan-taona i Milan. Katedraly Milan, Katedraly Milan no mari-toerana tokana hahagaga anao raha vao jerena voalohany. Noraisiko 600 taona hananganana ny katedraly lehibe indrindra any Italia, kanto, tsara tarehy, ary mahatalanjona amin'ny marbra mavokely maivana.
Varavarankely fitaratra miloko, singa gothic, ary ny sariolona volamena Madonnina eo an-tampony dia vitsivitsy amin'ireo singa hahaliana anao. Noho izany, raha tena maniry ny hidera ny katedraly Milan gothic manaitra ianao, dia afaka mandeha an-tampon-tampon-trano ianao. Noho izany, Katedraly Milan no hany katedraly manerantany, izay ahafahanao mandeha amin'ny tampon-tampon-trano.
2. Katedraly Sagrada Familia, Barcelona
Ny katedraly tokana mbola eo an-dàlana nanomboka teo 1882, Katedraly Sagrada Familia an'i Gaudi, dia asan'ny kanto. Ny katedraly Sagrada dia fifangaroan'ny Spanish Late Gothic, Art Nouveau, ary ny maritrano modernisme Catalan. Ny endrik'i Gaudi dia 18 tilikambo, maneho ny 12 Apôstôly, Maria Virjiny, ireo evanjelista efatra, ary i Jesosy Kristy avo indrindra.
Ankoatry ny, ny tsirairay amin'ireo lafiny telo dia samy manana endrika ivelany hafa tanteraka: ny endrika Passion, Voninahitra, sy ny fahaterahana nahaterahana. Noho izany, be dia be ny mahita sy mahita, amboary tsara ny dianao mankany Barcelona, mba tsy hanadino ity katedraly mahavariana ity.
3. Katedraly mahavariana indrindra any Eropa: Katedraly Kolner, Cologne
Namboarina 7 taonjato maro, ny Katedraly Cologne dia marika manaitra ny maritrano Gothic. Ary, Katedraly Cologne no toeran'ny arsevekan'i Cologne ary fiangonana lohataona avo indrindra eran'i Eropa.
Mahaliana, io toeram-pizahana mahafinaritra io dia trano fitobiana sy ahitra hatrany nandritra ny Tolom-piavotana frantsay. ankehitriny, tsy hahita sisan-javatra misy an'ity dingana ity amin'ny tantaran'ny katedraly ianao. Ny ao anatiny dia tsara tarehy toy ny ivelany miaraka amin'ny fitaratra sy fitaratra fitaratra misy fitaratra. Kolner Dom dia manaitra indrindra amin'ny jiro amin'ny alina sy amin'ny filentehan'ny masoandro.
Berlin mankany Aachen miaraka amin'ny lamasinina
Frankfurt mankany Cologne miaraka amina lamasinina
Dresden mankany Cologne miaraka amina lamasinina
Aachen mankany Cologne miaraka amina lamasinina
4. Basilika any Santa Maria Del Fiore, Florence
Pink, maitso maivana, ary tarehy fotsy marbra, gorodona mozaika ao anatiny, ny Basilica di Santa Maria any Florence dia katedraly fanavaozana miavaka. Fanampin'izany, Ny frescos an'i Giorgio Vasari amin'ny Fitsarana Farany eo amin'ny valindrihana dia tsy tokony hohadinoin'ireo mpitia zavakanto.
Ny katedraly Florence dia mihoatra ny mari-pamantarana iray. Na dia tsy liana amin'ny kanto aza ianao, ity katedraly ity dia hahaliana anao ary hahafinaritra anao hatrany ny kanto mahatalanjona mandritra ny ora maro. Raha mila rivotra madio ianao, avy eo miakatra any amin'ny Brunelleschi Cupola hijerena ny fahagagana an'i Florence mahagaga.
5. Katedraly mahavariana indrindra any Eropa: Charles Katedraly, Vienna
Mariky ny Vienna, St. Ny Katedraly Charles dia mahavariana amin'ny endrika fotsy sy domes maitso mavana. Namboarina tamin'ny fomba Baroque, St. Ny katedraly Charles dia nahasarika ny mpitsidika nanomboka ny 19faha taonjato. Ny katedraly dia natao hanomezam-boninahitra an'i Charles Borromeo, mpiaro, ny feeder, ary minisitry ny fijaliana amin'ny loza any Eropa ao amin'ny 16faha taonjato.
Na izany aza, ny endri-javatra mahavariana indrindra an'ny St.. Charles Basilica no 1250 metatra toradroa frescos ao amin'ny copula. Tsy toy ny katedraly eoropeanina hafa, Eto ianao dia afaka mandray ascenseur panoramika mba hankafizinao ny fresio akaiky. Noho izany, hamaranana, St. Ny katedraly Charles any Wina dia tsy tokony hohadinoinao fialantsasatra fitsaharana tanàna any Eropa.
6. Katedraly Le Mans, Frantsa
Natokana ho an'i Saint Julian, ny evekan'i Le Mans voalohany, Katedraly Le Mans, dia fifangaroana maritrano kanto amin'ny endrika gothic frantsay sy Romanesque nave. Iray amin'ireo fiasa mahavariana hisarika ny sainao ny bokotra manohana ny ivelany amin'ny endrika kanto. Arak'izany, ny endrik'ilay katedraly Le Mans dia iray amin'ireo tsara tarehy indrindra any Eropa.
Ary, ny vera misy pentina sy anjely voaravaka amin'ny valindrihana amin'ny katedraly dia manampy an'i Le Mans’ maritrano manaitra ary avelao ho anao harena be dia be ho hitanao ao amin'ity katedraly 500 taona ity.
7. Katedraly mahavariana indrindra any Eropa: St. Paoly Cathedral, London
Io dia manjaka amin'ny valin'ny lanitra London, fa amin'ny ivelany, Ny Katedraly Saint Paul dia tsy iray amin'ireo mari-pamantarana manaitra indrindra. Ny hatsaran'ny St.. Ny katedraly Paul dia hampiharihary ny tenany raha mandany fotoana ianao handehanana. dia, ho talanjona ianao amin'ny filalaovana haingo fotsy sy mainty. Ary, ny trano katedraly mihoatra ny 300 fahatsiarovana ny tsara indrindra any Angletera, toa an'i Wren tenany izay namolavola ny katedraly mahafinaritra.
Na izany aza, iray amin'ireo singa mahavariana indrindra ao St.. Katedraly Paul dia ny galona mibitsibitsika. Eny, raha mibitsibitsika amin'ny lafiny iray amin'ny galeriana ianao, ny rindrina hitondra azy amin'ny faran'ny lafiny iray.
8. Katedraly Berlin
Na dia simba be aza tamin'ny Ady Lehibe Faharoa, Katedraly Berlin dia katedraly mahavariana misy loharano sy ahitra maintso eo aloha. Ny Katedraly Berlin dia natsangana ho ampahany amin'ny lapan'ny tanàna Berlin, fa ny mpanao mari-trano Julius Carl Raschdorff dia nanova izany mba hanome taratra ny voninahitra sy ny halehiben'ny St.. Katedraly Paul any Londres. Ao amin'ny 1993, vita ny famerenana amin'ny laoniny, taorian'ny fianjeran'ny rindrin'i Berlin lehibe.
Ny singa mahavariana indrindra ao amin'ny Katedraly ao Berlin dia ny frestera, firavaka volamena, sy sarivongana. Ankoatry ny, ny taosy Saucer miaraka amin'ny mozika mampihetsi-po sy mampihetsi-po azy no taovam-pitiavana farany sy lehibe indrindra any Alemana izay mendrika manokana fotoana hipetrahana ary lisitra fotsiny. Noho izany, miakatra amin'ny sehatra hijerena ny fahitan'ny tanànan'ny Berlin hamita ny fitsidihanao iray amin'ireo 12 katedraly mahavariana indrindra any Eropa.
9. Katedraly mahavariana indrindra any Eropa: Saint Katedraly Basil, Moscow
Iray amin'ny ireo toerana mahavariana indrindra hitsidika an'i Russia dia Katedraly Saint Basil any Moskoa. Tsy afaka tsy hahita an'io katedraly mahatalanjona io ianao ary hahita azy amin'ny toerana rehetra ao amin'ny Kianja Mena sy ny sisa. Rehefa manakaiky kokoa ianao, fiangonana foibe misy fiangonana sivy hafa manodidina azy.
Ny endri-javatra mahavariana indrindra dia ireo tempoly ireo dia mifandray amin'ny alàlan'ny andalana manokana. I Ivan the Terrible no atidoha tao ambadiky ny katedraly Saint Basil, ary ny domes maroloko dia mistery mandraka androany. Raha ity karazana endrika ity dia niseho tamin'ny taonjato faha-17, fa ny safidin'ny loko tsy fantatra.
10. Katedraly Notre Dame, Paris
Nitsangana ny gargoyles ary ny fitaratra fitaratra misy fitaratra 2 amin'ireo fiasa izay hahasarika anao tahaka ireo mpitsidika hafa an-tapitrisany amin'ny katedraly Notre Dame any Paris. Mahafinaritra amin'ny ety ivelany, ary tsara tarehy anatiny, ny tahirimbolan'ny katedraly dia hitondra anao ambonin'ny tanàna romantika indrindra eran-tany, for Panoramika hevitra.
Ny vadintsika dia mijanona ao Ile de la Cite ary natokana ho an'ny Virjiny Masina. Ankoatry ny, ny katedraly no toerana hanaovana hetsika lehibe toy ny fanamasinana an'i Napoleon Bonaparte, ary ny fahamendrehan'i Joan of Arc. Noho izany, ny masonao dia ho faly amin'ny hatsaran'ny rafitry ny katedraly, ary ny sofinao mankafy ny tantaran'ny voninahitra.
11. Katedraly mahavariana indrindra any Eropa: Basilika Masindahy Marka, Venice
Izy io dia iray amin'ireo basilicas tsara tarehy indrindra any Eropa, fa relìtika miafina ao an-tranon'i Saint Mark's Basilica, manao azy ho katedraly mahavariana indrindra any Eropa. Araka ny angano, Ny Basilika Masindahy Marka dia natsangana mba hipetrahan'ireo sisa tavela tamin'i Marka evanjelista, iray amin'ireo apôstôly efatra, taorian'ny nangalarin'ny mpivarotra avy tany Egypt. Ity tantara ity dia manasongadina ny faha-13 mozika taonjato, ambonin'ny varavarana havia rehefa miditra amin'ny basilica ianao.
Fanampin'izany, Saint Mark's Basilica dia manana harena sarobidy kokoa noho ny firavaka satro-boninahitra Royal Family - ny Pala dOro. Ny Pala dia fanovana Byzantian, studded amin'ny mihoatra ny 2000 vatosoa. Hamaranana, raha mikasa ny hitsidika mari-toerana iray any Venise ianao, Saint Mark's Basilica no iray, ho an'ny liana, mpandeha amin'ny hatsaran-tarehy sy tia tantara.
12. St. Katedraly Vitus, Prague
Manerana ny renirano, sy ny tetezana, ao amin'ny Castle Castle Prague, you will be enchanted by Saint Vitus cathedral. It took close to 6 taonjato maro hamita ny katedraly gothic, amin'ny mari-pamantarana mahavariana sy miavaka indrindra eto Prague. Ny habetsaky ny fotoana nananganana ny Katedraly Saint Vitus dia hita taratra amin'ny fampifangaroana ny maritrano.
Katedraly Saint Vitus dia manana Renaissance, gôtika, ary singa Baroque: toy ny tampon'ilay tilikambo atsimo sy ny taova lehibe any amin'ny faritra avaratra. Ny varavarankely fitaratra-fitaratra dia mampiavaka ny katedraly sy St.. Ny varavarankelin'i Vitus dia tsy hianjera amin'ny hatsarany amin'ireo katedraly mahavariana hafa any Eropa.
We dia faly hanampy anao handamina fitsangatsanganana tsy hay hadinoina amin'ireto 12 katedraly mahavariana any Eropa amin'ny lamasinina, Midira amin'ny tontolon'ny Save A Train.
Te hampiditra ny bilaoginay “ve ianao 12 Katedraly mahavariana indrindra any Eropa ”ao amin'ny tranokalanao? Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary hanome antsika-bola miaraka amin'ny rohy ity lahatsoratra bilaogy. Na tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fmg%2Fmost-fascinating-cathedrals-europe%2F - (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)
Beautifulcathedralseurope Katedraly Duomo famouscathedralsineurope FascinatingCathedrals